Fanatanjahan-tena: hevitra 3 hanodinana ny akanjo taloha | Bezzia
Fanatanjahan-tena: hevitra 3 hamerenana amin'ny laoniny ny akanjo taloha
Tony Torres | 18/09/2021 10:00 | an-trano
Ny fanaingoana dia amin'ny lamaody ary ny fomba fampiasana indray ny zavatra dia nanjary fahita matetika. Izay taloha natao fomba fiaina dia maoderina, satria ny tanjona dia ny hiarovana ny planeta, ny loharano ary hampihena ny dian-janahary. Taloha, ny zavatra dia namboarina sy nampiasaina indray mba hitahiry vola, satria tsy afaka manary zavatra mety mbola hampiasa fanindroany ianao.
Amin'ny ankapobeny dia ny fitondra bisikileta, teny maoderina izay manondro teknika fanodinana. Manokana, amin'ny teknika fampiasàna indray ireo fitaovana izay novaina ary lasa zavatra hafa manana lanja lehibe kokoa noho ilay voalohany. Fomba iray hanome fiainana faharoa an'ireo karazana zavatra rehetra, fanaka ary mazava ho azy, izay fitafiana rehetra.
1 Amboary ny lamba tonta
1.1 Ny loko matevina
1.2 Peta-kofehy sy lamba
Amboary ny lamba tonta
Manjary mora kokoa ny mividy akanjo, saika isan-kerinandro dia mivoaka ny fanangonana vaovao, mora kokoa, mora kokoa ary mora azo. Havaozina isa-minitra ny lamaody ary sarotra ny tsy ho entin'ny fironan'ny mpanjifa. Saingy tsy fandaniana ara-toekarena fotsiny izany, fa koa lamaody mandany harena be dia be ary miteraka fako be toy izanys, izay manimba ny fahasalaman'ny planeta.
Ny filan'ny lamaody dia misy koa amin'ny fahalalana ny fomba fampiasana indray ny akanjo, amin'ny fampifanarahana azy ireo hahazoana endrika vaovao sy nohatsaraina amin'ny akanjo tsirairay. Izany no atao hoe fitondra-bisikileta ary antenaina fa ho lasa fomba fiaina tsy ho ela ho an'ireo izay mahatsapa ny filana mampihena ny dian-tongotr'izy ireo. Raha te hahay hanova ny fitafianao ianao, Omeo fiainana faharoa izany ary anaovy akanjo tsy manam-paharoa, raiso ireo hevitra ireo mba hamerenany ny akanjo taloha.
Ny loko matevina
Tie-dye dia iray amin'ireo teknika fantatry ny maro amin'ny fampiasana indray ireo akanjo very loko na sendra lozam-pifamoivoizana nandritra ny fanasan-damba. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy afa-mivoaka amin'ny lamaody izy io, satria ny akanjo vita amin'ny pirinty vita amin'ny dity dia fironana feno. Ny dikany amin'ny teny espaniola amin'ilay teny hoe tie-dye dia ara-bakiteny, noho izany dia mazava ny zavatra ahitana ilay teknika.
Azonao atao ny manamboatra endrika mihosotra amin'ny legia na amin'ny loko, kokoa ny voajanahary. Mila mamatotra elastika fotsiny ianao amin'ny faritra samy hafa amin'ny akanjo, amin'ny toerana tena tianao hananana ny endrika mampiavaka ilay loko mamatotra. Talohan'izay dia mila mandena ny akanjo amin'ny rano mangatsiaka ianao ary mamoaka ny loko amin'ny rano mafana. Safidio aloha ny volavola tianao indrindra akanjo mandoko, afatory ny elastika ary mankafy akanjo havaozina tanteraka. Io teknika io no lamaody ka amin'ny Internet dia afaka mahita fampianarana ianao mba hamoronana endrika am-boalohany indrindra.
Peta-kofehy sy lamba
Ny knitting dia iray amin'ireo zavatra taloha izay niverina tamin'ny lamaody ary hitanao bebe kokoa ny sarin'ireo olona manan-kaja manamboatra ny akanjony. Ny Crochet dia mety amin'ny fanodinana akanjo taloha, satria raha manampy antsipirihany amin'ny faritra stratejika ianao dia hahazo akanjo vaovao tanteraka. Raha mbola tsy nanapa-kevitra ny hianatra ny baoty ianao, amin'ny Internet dia hahita fampianarana maro be ho an'ireo vao manomboka ianao.
Amin'ny lamba dia ho hitanao ny fialamboly feno tombontsoa, ​​azonao atao ny manamboatra ny akanjonao manokana, araka ny filanao sy ny refy. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mampiasa ny teknikan'ny crochet fototra indrindra hamerenana amin'ny laoniny ny akanjonao taloha. Ohatra, ampio dantelina amin'ny tanany T-shirt, amin'ny vozon'akanjo akanjo na ao am-paosy. Afaka manao izany koa ianao ahita ny tontolo kanto amin'ny peta-kofehy, teknika ahafahanao mamorona endrika tsy manam-paharoa amin'ny lambanao. Raha tsy mila manana fahalalana lehibe momba ny zaitra ianao dia afaka mamorona zavaboary tokana sy am-boalohany amin'ny akanjo taloha.
Ny hevitra dia ny fanaovana ny ankamaroan'ny akanjo, avelao ny eritreritrao sy ny fahaizanao manidina ary mahita ny fahafinaretana mamorona zava-baovao amin'ny tananao manokana. Amin'ny fanodinana ny akanjo taloha dia tsy vitan'ny hoe manangona vola be ianao, fa afaka manao akanjo hafa tanteraka koa. Tsy manadino fa hiady ianao hitahiry ny planeta, hampihena ny dian-tongotra ekolojika ary manampy amin'ny fananganana tontolo tsara kokoa ho an'ireo ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Fanatanjahan-tena: hevitra 3 hamerenana amin'ny laoniny ny akanjo taloha
Lafarinina chickpea: ny tombo-tsoa azo avy aminy sy ny hevitra lehibe hampiasana azy
Tsara ve ny manantena ankizy be loatra?